प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता Dzhon डेरेक XX सताब्दी एक उज्ज्वल र व्यस्त जीवन बस्थे। उहाँले निर्देशक काम, व्यावसायिक फोटोग्राफी मा लगे र धेरै फिलिमहरु को निर्माता भएको थियो।4विवाह र2बच्चाहरु - एक अभिनेता को व्यक्तिगत जीवन पनि विचारणीय छ। सुन्दर मजा, प्रतिभाशाली र बाहिर जाने - Dzhon डेरेक को प्रशंसक त स्मरणीय छ।
डेरेक फिल्म उद्योग को दिल मा जन्म भएको थियो - हलिउड। यो अगस्ट 1926 मा भयो। Dereka Dzhona परिवार (पूरा नाम Dellevan डेरेक हैरिस), सीधा सिनेमा सम्बन्धित थियो। केटा पिता - विलियम लसन हैरिस - एक प्रसिद्ध अमेरिकी निर्देशक थियो। धेरै वर्ष को लागि उहाँले अष्ट्रेलिया मा फिलिमहरु सिर्जना मा काम गरे। Dolores जनसन, डेरेक को आमा, पछिल्लो शताब्दीको 30 सेकेन्ड मा जानिन्छ, अभिनेत्री पनि थियो।
बाल्यकाल देखि केटा चलचित्रहरू मा एक क्यारियर को सपना देख्यो। यो बढुवा भएको थियो र उपस्थिति र अभिनय कौशल। वर्ष पछि, Dzhon डेरेक बारम्बार आफ्नो रुचि को विशुद्धता भन्ने कुरामा विश्वस्त।
उमेर 18, जवान अमेरिकी सेना मा मस्यौदा तैयार थियो। उहाँले 1944 मा फिलिपीन द्वीप मा सेवा र दोस्रो विश्व युद्ध को धेरै लडाई मा भाग लिएका थिए।
जीवनी Dzhona Dereka कला मा फोटो संग थाले। फ्रेम कब्जा गर्न आवश्यक जब त्यो ठीक लाग्यो। आफ्नो प्रतिभा फोटो को एक ठूलो संख्या पुष्टि भएको थियो। सबै अभिनेता को पत्नी चित्रण गरिएको। तस्वीर "प्लेबय" र अन्य चिरपरिचित प्रकाशनहरू को पृष्ठ मा प्राय देखियो।
डेरेक गरेको अभिनय क्यारियर छोटो फिल्म भूमिका संग 1943 मा शुरू भयो। तुरुन्तै जवान र सुन्दर जवान देख्यौं। सबैभन्दा आफ्नो काम प्रसिद्ध "सबै राजाको पुरुष," "Robina Guda को बदलयो", "Outcast" को तस्वीर थिए। Dzhona Dereka पूरा Filmography 40 फिलिमहरु छ। र यो केवल एउटा अभिनेता जस्तो छ। साथै, हाम्रो नायक को थिएटर मा प्ले।
1956 मा, फिलिम बाहिर स्क्रीन मा "दस आज्ञा।" Dzhon डेरेक सुन्दर येशूले प्ले। यो काम अभिनेता को क्यारियर मा सबै भन्दा सफल भयो। उनको मृत्यु पछि एक वर्ष, चित्रकला अमेरिकी फिलिमहरु को राष्ट्रिय दर्ता समावेश थियो।
1965 देखि उहाँले यूहन्नाको निर्देशक रूपमा काम सुरु हुन्छ। सबै 8 फिलिमहरु डेरेक टिमवर्क र राम्रो विचार निर्देशक को परिणाम थिए।4तस्वीर डेरेक बो को आफ्नो अन्तिम पत्नी लिए। आलोचकहरु यो काम एक मिश्रित मूल्यांकन प्राप्त र विवाद धेरै कारण।
निर्माता को क्षेत्र मा Dzhon डेरेक लामो काम गरेको छ। तर उहाँले सधैं लायक लगानी छ परियोजना कस्ता मा, लाग्यो। आफ्नो निवेश को धेरै लाभदायक थिए।
पछिल्लो directorial काम painting "सक्दैन को भूत।" थियो त्यो 1990 मा जारी भएको थियो। निर्देशक यूहन्ना डेरेक को सबैभन्दा खराब काम रूपमा पुरस्कार "स्वर्ण रास्पबेरी" को लागि फिल्म को नामांकन पछि त्यो फिल्म गरिरहेको रोकियो र हलिउड बाँकी।
हलिउड hunk डेरेक Dzhon सधैं महिलाहरु को एक मनपर्ने छ। यहाँ बाट अभिनेता को4विवाह पालना गर्नुहोस्।
आफ्नो पहिलो पत्नी सबै बीच विशेष थियो। प्याट्रिसिया Erestova टोलस्टोय को नजिकको नातेदार थियो। उनको परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका मा सोभियत संघ देखि emigrated। पाटी संग विवाह आकार 1951 मा भयो। विवाहको6वर्ष को लागि, दुई केटाहरु जोडी जन्मिएको थियो। 19 वर्ष को उमेर मा रसेल को जेठो छोरा एक मोटरसाइकल दुर्घटना मा पायो र जीवनको लागि पक्षाघात भएको थियो। जुनियर - शन, पछि एक प्रसिद्ध फिलिम निर्माता भयो।
1957 मा, जोडी छोडपत्र। पार्टी - डेरेक मात्र पत्नी, थियो उनको श्रीमान्को फिलिमहरु को शूटिंग संलग्न र "प्लेबय" पृष्ठहरूमा देखा छैन जो।
तुरुन्तै छोडपत्र पछि, Dzhon डेरेक एक स्विस अभिनेत्री विवाह Ursula Andress। त्यो जेम्स बण्ड फिलिमहरु को पहिलो भाग फिलिम लागि ज्ञात छ।
केटी पतिको अक्सर प्रकाशित फोटो आधा नाङ्गो धेरै सुन्दर थियो, र। पारिवारिक जीवन9वर्ष लामो थियो।
अर्को "श्रीमती Dzhon डेरेक" लिंडा इभान्स थियो। त्यो टिभी श्रृंखला "राजवंश," त्यो "गोल्डन ग्लोब" प्राप्त जसको लागि उनको भूमिका लागि ज्ञात छ।
पछिल्लो विवाह Dereka Dzhona 1976 मा भयो र अभिनेता को मृत्यु सम्म लामो थियो। युवा मोडेल Meri Kollinz (बो डेरेक) एक मध्य-वृद्ध womanizer को हृदय जित्यो छ। जन र लिंडा छोडपत्र किनभने यो छ। र उहाँले त्यो एउटा वयस्क थिएन किनभने, सँगै बो संग, जर्मनी जाने थियो।
जोडी 22 वर्षसम्म सँगै बस्ने गरेका छन्। पछिल्लो केही वर्ष प्रशंसा प्रकृति र घोडचढी indulged जो दम्पती सान Ynez उपत्यकाका खर्च।
Dzhon डेरेक 1998 मे 22 मा मृत्यु भयो, सान्ता मोनिका मा। मृत्युको कारण हृदय समस्या थियो। आफ्नो अनुरोध मा अभिनेता शरीर cremated थियो।
Dzhennifer Lav Hyuitt (जेनिफर प्रेम हेविट): जीवनी, Filmography, परिवार
पुरातन समयका बारेमा ऐतिहासिक फिलिमहरु
Gojko Mitic को जीवनी - सबै भन्दा प्रसिद्ध "भारतीय"
Aleksandr Mihaylov: जीवनी, चलचित्र, अभिनेता व्यक्तिगत जीवन
अक्षरहरू र षड्यन्त्र विवरण: "राक्षस केटी संग प्रतिदिन जीवन"
व्लादिमीर Torsuev: जीवनी, Filmography, व्यक्तिगत जीवन, फोटो
3 मार्च - संसारको इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो
Quinoa: उपयोगी गुण, खाना पकाउने र लोक चिकित्सा मा प्रयोग
Kamyshovaya मा छोराछोरीको क्लिनिक (सेन्ट पीटर्सबर्ग): विवरण, सेवा,
कारण, लक्षण र मध्यवर्ती nephritis को उपचार
मैले के गर्नु पर्छ? म मूर्ख महिला निष्कर्षमा नचिन्नुहोस्
के Endemic छ र "तिनीहरूले खान के?"
निश्चित सम्पत्ति मा फर्कन - प्रयोगको प्रभाव को एक सूचक
ओजोन जेनेरेटर: लाभ र सुविधाहरू
फ्रीजर "Bork": वर्णन, आइसक्रिम निर्माता लागि आइसक्रिम व्यञ्जनहरु